अर्थमन्त्रीमाथि संसदमा प्रदिप गिरीकाे व्यंग्य वाँण वर्षा - हिमाल दैनिक
अर्थमन्त्रीमाथि संसदमा प्रदिप गिरीकाे व्यंग्य वाँण वर्षा
सांसद र जनतालाई हेप्ने अर्थमन्त्रीले एक पटक चुनाव लडेर हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ, जनप्रतिनिधिको पिडा
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार १७:३७
सरकारका अर्थमन्त्रीद्धारा हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेट यसवर्ष पनि प्रस्तुत भएको छ। हामी धेरै यस्ता सांसदहरु छौँ, जसले धेरै यस्ता उतार चढाबहरु देख्यौँ। धेरै वर्षदेखि यस बजेटका पक्ष र विपक्षमा यस्तै दस्तावेजका उपर बोली आएका छौँ। सम्झनु पर्ने के छ भने, एउटा बजेटको पुस्तिका आफैमा राजनीतिक अथवा आर्थिक दर्शनको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति होइन।
बजेटभन्दा धेरै माथि राज्यको जीवन दर्शन हुन्छ। राजनीतिक चिन्तन हुन्छ र मुलुकको परिस्थिति हुन्छ।
मुलुकको ठोस वस्तुस्थिति कुनै अर्थमन्त्रीले चाहदैमा वा कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा रातारात फेरिने कुरा पनि होइन। त्यसो हुँदा हामीले यस बजेटलाई मुलुकमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाएका तथ्य, संसाधानहरु, मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तित पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा हेर्नु पर्ने हुन्छ।
यो बजेटमा मैले के खोजेँ होला त? वर्षौदेखि लगातार बोलिरहेको मानिस, लगभग उनै कुरा बोलिरहेको मान्छ के खोजेँ होला त?
पुरानो नेकपा माओवादीका सर्वमान्य नेता अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिकालमा बारम्बार निरन्तरता र छलाङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो।
त्यो शब्द उहाँले नाटकीय ढंगले भन्नु भयो, होइन भने राजनीतिक विज्ञानमा यो शब्द बारम्बार प्रयोग भइराख्दछ। चाहे फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिमा, चाहे रुसी राज्य क्रान्तिमा जहिले पनि के भनिन्छ भने क्रान्तिले नयाँ कुरा के के ल्याएको रहेछ हेरौँन र क्रान्तिमा पुरानो कुरा के के रहेछन्।
समाजशास्त्रीले के गरेका छन् भने, क्रान्तिका चार पाँच वर्ष उथल पुथल हुन्छ। अभागीहरु कतिपय काटिन्छन् पनि। तर, १५÷२० वर्षपछि हेर्दा त त्यी सबै निजामति सेवाका कर्मचारीहरु, सबै सेनापतिहरु, सबै हाकिमहरु, पुलिसका प्रमुखहरु करिब करिब उनै आइसकेका हुन्छन्। रुसी क्रान्तिले, फ्रान्सेली क्रान्ति र चिनिया क्रान्तिले र हाम्रै २००७ सालको क्रान्ति समेतले पनि यहि कुरा देखाएको छ।
यसैले बजेटमा निरन्तरता त छ तर, छलाङ के छ भनेर मैले हेरेँ। नयाँ कम्युनिष्ट बनाएको छ भने छलाङको थोर÷बहुत संकेत त यसमा अवश्य होला भनेर हेरेँ।
म बधाई दिन चाहन्छु बजेटका लेखकलाई, छलाङ छ। निरन्तरताका लागि मेरा पूर्ववक्ता मित्रहरुले उहाँलाई बधाई दिइसकेका छन्।
अर्थशास्त्रीले पनि बधाई दिइसकेका छन्। ओहो, यो बजेटलाई त अनुशासित बनाइयो, झण्डै झण्डै रामशरण महतको जस्तै बनाइयो भनेर भनिसकेका छन्। त्यसका लागि मैले भन्नु परेन।
यद्यपि रामशरण महतको बजेटलाई पनि धेरै कडा भाषामा यहि मञ्चबाट आलोचना गरेको छु। छलाङ यसमा दुई वटा कुरा छ। एक त वर्तमान शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले पनि छलाङ देखाइसक्नु भएको थियो। लगभग सबै अझ बढि विकेन्द्रीत गर्नु पर्ने संस्थाहरुलाई आफ्नो मातहतमा केन्द्रीत गरेर छलाङ देखाइसक्नु भएको थियो। थप छलाङ यहाँ कहाँ छ भने, जहाँ कतिपय आत्मनिर्भर हुनु पर्ने शिर्षक दिएर त्यस्ता उद्योगहरुलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु भएको छ।
पूर्ण रुपेण वल्र्ड बैंक र आइएमएफको इशारामा चल्नु पर्ने मुलुकले साँचैनै त्यसकिसिमको नियन्त्रणमूखी अर्थतन्त्र ल्याउनु भयो भने म उहाँलाई अहिले नै लाल सलाम ठोक्छु।
म यसका लागि उहाँलाई पूर्व शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्को छलाङ छ यहाँ, अनियमित काम भएकोमा नागरिकताको सुविधा यादव खोसिने छ भन्नु भएको छ। एक त नागरिकता नै नेपाली राज्य र राजनीतिको ठूलो विशेषता हो। नागरिकता नभई एडमिशन गर्न पाइदैन, जग्गा नै किन्न पाइदैन, जागिर पाइदैन, विदेश जान पाइदैन। अब एउटै मात्र बाँकी छ रेष्टरुपम पनि जान पाइदैन भन्नु पर्नेे। सबै कुरा नागरिक सुविधामा अडिएको देशमा कतिपय आर्थिक अपचलनका लागि नागरिक सुविधा समेत खोसिने छ भन्नु यो ठूलो जनवादी छलाङ हो।
जनवादी छलाङका बारेमा नेकपा एमालेको प्रस्तुत चर्चित दस्तावेज जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेका यस समयका पाका कामरेडहरुले पढ्नु भएकै होला। बडो स्पष्ट र ढुक्कसँग प्रातस्मरणीय कमरेड मदन भण्डारीले लेख्नु भएको थियो, बहुदलीय जनवाद बहुदलीय व्यवस्था हो। यसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्दछ तर, जनताका विरुद्ध कुनै समूह गयो भने त्यस्ता जाने सानातिना मुठ्ठिभरको नागरिक अधिकार अपहरण गरिन्छ।
त्यसको प्रध्वनि यस बजेटमा पाएर मलाई साच्चै कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धताप्रति गर्व छ। सारा दुनियामा कम्युनिष्ट पार्टीहरु सिध्दिदै छन् नेपालमा पहिलो पटक साँचो कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएछ भनेर यो बजेटका लेखकलाई पनि बधाइ दिन चाहन्छु।
बाँकी मित्रहरुले इष्र्या नगर्नु होला, कांग्रेसले त पटक्कै यसमा तालि नबजाउनु होला। तपाइलाई थाहा छ, बारम्बार मैले यस मञ्चबाट आर्थिक पक्षकाबारेमा बोलेको छु। म विकासको वर्तमान अवधारणालाई मान्दिन। यो विकास होइन, यो विनाश हो।
सबैले शंका गरेका छन्। सबैले अविश्वास गरेका छन्। के को रेल ल्याउँछ यो केपी ओलीले? उहाँलाई रेल ल्याइदिन्छ कि भन्ने जुन चिन्ता छ, मलाई झन ठूलो चिन्ता छ कि रेल आयो भने के हुन्छ?
कहाँबाट हो रेल आउने? तपाइले ग्राण्टबाट रेल ल्याउनु हुन्छ? त्यसलाई थेग्न सक्नु हुन्न। लोनबाट ल्याउनु हुन्छ? श्रीलंकाको, भेनेजुयलाको र विभिन्न ८ देशको चाइना डेब्टट्रयाप अरुले नपढेपनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पढ्न नभ्याउनु भएको भएपनि प्रशस्तै अर्थशास्त्रीले त पढ्नु भएको होला त। धन्न त्यो डेव्टट्रयाप त पूरा इनर्जीको छैन। यो डेब्टट्रयापको कुरा गर्दाखेरी अर्थात ऋणबन्धको कुरा गर्दा श्रीलंकाको दुर्दशाकोबारेमा पढ्दा मैले छर्लङग बुझेको छु। अर्थमन्त्रीले किन भन्नु पर्यो कि म ट्रयापमा परेँ? बोल्दा हाड नभएको जिब्रो लरबरियो होला।
उहाँको कुरा मान्छेले के बुझेः सांसदहरुको ट्रयापमा पर्यो भन्ने बुझे। सांसदहरुको ट्रयापमा के पर्नु पर्दथ्यो? सांसदहरुको भन्दा बढ्ता अपमान आज मुलुकमा कसैको छ? ट्रयाप उहाँ केमा पर्नु भयो भने, आफूले एमएमा पढेको शिक्षा, पिएचडी गरेको शिक्षा, वल्ड बैंकसँग भएको संगत, एकतिर छ, नेताहरुको दबाब अर्कोतिर छ। त्यसैले उहाँ अन्तरआत्माको र महाबली नेताको ट्रयापमा परेको हो। त्यो भन्न नजानेर हो, सांसदको ट्रयापमा होइन।
नेताहरु भन्छन्, सुपरसोनिक जेट ल्याउ। त्यो तारा मात्रै होइन जुन पनि खसाई दिउँला। नेताहरु भन्छन्, विजुलीबाट रेल चलाइदिउँला। नेताहरु भन्छन्, चन्द्रमामा पुर्याइदिउँला। जनता वाह, वाह, भनेर तालि बजाउँछन्। त्यहि त खोजेको हो नि भन्छन्।
अब अर्थमन्त्रीले हिसाब किताब गर्ने हुनाले थाहा छ, नेपालको आजको त्यो आवश्यकता पनि होइन र त्यो धान्न पनि सक्दैन। नेता त्यो होइन जो उपभोक्ताका पछि लाग्दछ, नेता त्यो होइन जो थपडि धपडि खानका लागि बहुमतको पछि लाग्छ। बहुमतमात्रै कुनै पनि मुलुकको उन्नती र प्रगतिको एकमात्र कसौटी होइन। बहुमतमा अलमलिनु भएका मित्रहरुले छरछिमेकका धेरे बहुमत देखेको हुनु पर्दछ। विश्वमा बहुमत देखेको हुनु पर्छ।
यस मुलुकलाई आज गणतन्त्र मुताविकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिएको छ। तीनवटा आधारभूत कुराहरुः कसरी हामीले यस मुलुकमा बढि भन्दा बढि रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्छौँ? कसरी विदेशीएका हाम्रा दाजुभाई र लगत नभएका दिदिबहिनी भित्रीन्छन् त्यो हाम्रो चिन्ता थियो। त्यसको एउटै समाधानको ठाउँ छ कृषि, अर्को छैन।
म अर्थमन्त्रीलाई यसकुराका लागि धन्यवाद र बधाइ दिन चाहन्छु, उहाँले कमसेकम आफ्नो क्रम सुरु गर्दा रोजगारबाट गर्नु भएको छ। तर, रोजगारलाई उहाँले झण्डै झण्डै मुखमा राखेता पनि रोजगारी श्रृजनाका बाटा के छन् त? रोजगारी श्रृजनाका बाटाका बारेमा जुन अध्ययन, गम्भिरता र बाटो देखाउनु पथ्र्यो त्यो उहाँले पटक्कै संकेत पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यहाँ छलाङले जितेको छैन। त्यहाँ छलाङ हारेको छ। त्यहाँ क्रमिकताले जितेको छ। त्यहाँ क्रम भंगता छैन, निरन्तरता छ।
निरन्तरता के छ भने, यस्ता आश्वासन, यस्ता प्रस्तुती, यस्ता प्रस्ताव विगत २० होइन २५ वर्षदेखि दिइँदैछ। त्यो अर्थमन्त्रालय अथवा योजना आयोगका कर्मचारीले लेख्दछन् र त्यसमा दस्तखत गर्ने काम मात्रै अर्थमन्त्रीको रहन्छ। त्यहि भएको छ। के गर्न सकिन्थ्यो त के गर्न सकिन्छ? म यहाँ उदार बन्न चाहन्छु, हामी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष मिलेर काम गर्नु परेको छ र सँगै अघि जानु परेको छ।
म बेनिफिट अफ डाउट दिन चाहन्छु, अर्थमन्त्री भर्खरै आउनु भएको छ। विगतका अनुभव जे भएपनि जनराजनीतिको अनुभव उहाँलाई छैन। प्रधानमन्त्री अथवा नेताहरुमा उत्साह ज्यादा छ तर यो समस्या धेरै ठूलो छ।
नेपाल जस्तो गरिव र भूमण्डलीकरणले घेरेको मुलुक भारत र चाइनाजस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकले घेरिएको मुलुकले साच्चो अर्थमा आत्मनिर्भर रोजगारमुखी अर्थतन्त्र कहाँ बनाउने हो त? एकातिर ट्रयाप, आफ्नो आर्थिक अनुशासन, आर्थिक अध्ययन, अर्कोतिर नेताहरुको पपुलिष्ट मागको ट्रयाप, अर्कोतिर सांसदको ट्रयाप। सांसद पनि कस्ता भोका नांगा भने, भूइचालोको पाँचसय रुपैयाँको (त्रिपाल) पनि लिएर जाने, कुनै सुविधा पनि नछोड्ने। एक दुइ जना होलान, सुविधान नलिने, सारा सुविधा चाहिने त्यीनीहरुलाई तपाईले ठिक जवाफ दिनुभयो अर्थमन्त्रीज्यू, सांसदहरुले यहि जवाफ खोजेका थिए।
एकपटक विनम्रता पूर्वक भन्न चाहन्छु, अथमन्त्रीज्यूले पनि एक पटक प्रत्यक्ष चुनाव लढ्नै पर्छ। अनि शानसँग जवाफ दिन मिल्छ।
एकजना विशाल मैले पनि गुरु मानेका अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, त्यो भन्दा पनि ठूला ऋषिकेश शाह, उहाँहरुले पनि चुनाव लड्नु भएको थियो सभामुखलाई याद छ? त्यसैले अरु ट्रयापका कुरा गर्नुहोस् निमुखा सांसदको ट्रयापको कुरा गर्नु भयो कि त्यीनको मर्म पनि बुझ्नुहोस्।
म अर्थमन्त्रीलाई एक पटक थप बधाई दिन चाहन्छु, यदि यसमा साच्चैनै उहाले आफ्नो व्यक्तित्वको प्रर्दशन गर्नु भएछ भने साँच्चै नै उहाँले बलिया बाङ्गा नेता बाहेक कसैलाई टेरपुच्छार लगाउनु भएको छैन। जो उहाँको विवेकले देख्यो त्यहि गर्यो। अर्को विवेकको परिक्षा कहिले हुन्छ भन्ने कुरा मेरा युवा मित्र गगन थापाले भनेर गइसक्नु भएको छ। तर, म गगन थापा जति आशावादी छैन। त्यो विवेकको परिक्षाका लागि एकवर्ष पर्खिरहनु पर्ने छैन। यहाँ सबैभन्दा ठूलो कुरा के छ भने, यहाँ अर्थमन्त्रीले जनप्रतिनिधि सांसदलाई हेपेजस्तै, आम जनतालाई हेपेको छ। बजेटको आजको अवधारणा सांखेकी र यान्त्रिकी आधारमा चल्दैन, ह्युमन डिभलप्मेण्टको कन्सेप्ट भनेको के हो त्यहाँ आर्थिक विकासको केन्द्रमा मनुष्य रहनु पर्दछ।
बजेटको आलोचना यसअर्थमा भएको छ कि सांसदलाई तपाइले चार करोड रुपैयाँ दिनु भयो र गाउँ विकासका मान्छेलाई सामेल गर्नु भयो भनेर। त्यो सामेल गरेर ठिक काम गरेको छ बजेटले। उनीहरुले मिलिजुलीकै काम गर्नु पर्ने हो। गाउँको अध्यक्ष, एमएलएलेले। तर, त्यो भन्दा पनि तल लैजानु पर्दछ। विकास एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो आर्थिक साख्यको खेल होइन। विकास मनुष्यलाई इन्भल्भ गर्ने कुरा हो। यो मैले भनेको होइन, तपाइहरु सबैलाई थाहा छ एशियाका एक मात्र उल्लेखनिय अर्थशास्त्री अमात्य सेनले भनेको हो। बारम्बार भन्नु हुन्थ्यो बी.पी. कोइराला विकास आर्थिक काम होइन, राजनीतिक काम हो। अब कम्युनिष्ट पार्टीले बी.पी. कोइरालाको कुरा सुन्ने कुरा छैन।
(बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा आइतबारको संसदमा कांग्रेस नेता प्रदिप गिरीले व्यक्त गरेका विचारहरुको सम्पादित अंश)
Prevपछिल्लोप्रकृतिले धनि भएर पनि प्रविधीमा कमजोर हुँदा नेपाल पछि पर्योः पौडेल
अघिल्लोसरकारको सय दिन उपलब्धिमूलक रहेन: उपसभापति निधिNext